व्यवसायीको पेशागत हकहित नै हाम्रो प्राथमिकताः दाङ चेम्वरका अध्यक्ष श्रीधर महरा – जागरण अनलाइन
व्यवसायीको पेशागत हकहित नै हाम्रो प्राथमिकताः दाङ चेम्वरका अध्यक्ष श्रीधर महरा
२०७६ श्रावण २२, बुधबार २१:५३ मा प्रकाशित
चेम्वर अफ कमर्श दाङ शाखा गतबर्ष बर्ष स्थापना भएको थियो । व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गतबर्ष साउनको १६ गते दाङ उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा यो संस्था स्थापना भएको थियो । चेम्वर अफ कर्मश स्थापनासँगै दाङका व्यवसायीहरु समेत विभाजित भएका थिए । दाङ उद्योग बाणिज्य संघ मात्र रहेको अवस्थामा चेम्वर अफ कर्म स्थापनाले केही हलचल पैदा गरेको थियो । यो विचमा कर्मश स्थापनासँगै व्यवसायीहरुलाई संगठित बनाउनेदेखि व्यवसायीका हकहितमा काम गदै आएको संस्थाले जनाएको छ । चेम्वर अफ कर्मशको पहिलो अधिवेशन केही समय अघि सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनले श्रीधर महराको संयोजकत्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । अध्यक्ष महरासँँग गोरक्षकर्र्मि लीलाधर वलीले गरेको कुराकानीको सार सक्षेप ।
प्रश्नःतपाईलाई साताबार्तामा स्वागत छ ?
उत्तरः धन्यावद तपाई र गोरक्ष दैनिक पत्रिका परिवारलाई यो विचार राख्ने अवसर दिएकोमा ।
प्रश्नः चेम्वर अफ कमर्श भनेको के हो ?
उत्तरः चेम्वर अफ कमर्श भनेको व्यवसायीहरुको व्यवसायीक सुरक्षा र हकहितका लागि स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था २००७ सालमा निजी व्यवसायी उद्योगीहरुको हकहितका पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । पछि २०१० सालमा सरकारले ल्याएको विधि र विधानमा रहरे पहिलो व्यवसायीक संस्था गठन भएको हो । यो तत्कालिन समयमा काठमाडौमा मात्र सिमित थियो । चेम्वर अफ कमर्शकै आव्हानमा काठमाडौका व्यवसायीहरुले २०१५ सालमा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ गठन गरे । त्यसको आठ बर्षपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका रुपमा परिणत भयो । त्यसमा पनि चेम्वर अफ कर्मशको महत्वपुर्ण भुमिका थियो । त्यसपछि महासंघले आफना शाखाहरु देशभर खोल्न थाल्यो । तर चेम्वर अफ कमर्शले तत्कालीन समयमा काठमाडौ उपत्यकाका भित्रका व्यवसायीहरुको हकहितमा काम गर्ने सहमति भएकाले त्यही अनुसार काम गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा काठमाडौमा मात्र नभएर देशभरका व्यवसायीहरुको हकहितमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकाले देशभर आफना शाखाहरु खुल्न थालेका छन ।
प्रश्न ः व्यवसायीहरु चेम्वर अफ कमर्शमै किन आवद्ध हुने ?
उत्तर ः नितीगत सिद्धान्तका हिसावले दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कमर्शका विचमा खासै भिन्नता छैन । दुवै संस्थाहरुले व्यवसायीक सचेतना र हकहितका लागि काम गर्ने हो । संस्थाको उद्देश्य अनुसार हामीहरुले व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीक हकहितको लागि जानकारी गराउने, तालिम चलाउने र प्रशिक्षित गर्ने काम गर्दै आएको छौँ । र व्यवसायीहरुलाई संगठित बनाउने काम गर्दै आएका छौँ ।
विधान हिसावले कुरा गर्ने हो भने दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले नगर क्षेत्रमा मात्र आफुले संगठन बनाउन पाउँछ । तर हामीहरुले गाउँगाउँमा छरिएर रहेका व्यवसायीहरुलाई एकता बनाउन सक्छौँ । व्यवसायीलाई परेका दु.ख,पिरमर्कामा साथ दिन सक्छौँ । उद्योग बाणिज्य संघले व्यवसायीहरुका हकहितका पक्षमा काम गर्न नसकेका कारण चेम्वर अफ कर्मश स्थापना भएको हो । त्यसैका कारण व्यवसायीहरु उद्योग बाणिज्यमा आवद्ध नभएर चेम्वर अफ कमर्शमा आवद्ध हुने गरेका छन ।
प्रश्न ः दाङमा चेम्वर अफ कमर्शप्रतिको आकर्षण कस्तो छ ?
उत्तर ःदाङमा चेम्वरअफ कमर्श स्थापना भएको एक बर्ष पुगेको छ । यो एक बर्षको अवधिमा सस्थालाई सगठित बनाउने काम गरेका छौँ । कुनै पनि सस्थालाई बलियो बनाउनकालागि सस्थामा धेरै सदस्य हुन आवश्यक छ । त्यही अनुसार हामीहरु पनि अहिले सस्थाको सदस्य खुल्ला गरेका छौँ । त्यही अनुसार घोराहीमा सदस्य थपिने क्रम बढि रहेका छन । यसलाई हामीले चेम्वर अफ कर्मशप्रतको आकर्षणका रुपमा लिने गरेका छौँ । उद्योग बाणिज्य संघले व्यवसायीहरुको पक्षमा काम गर्न नसक्दा पछिल्लो समय व्यवसायीहरु हाम्रो संस्थामा आउने क्रम बढेको छ । त्यो भनेको हामीले व्यवसायीका पक्षमा काम गरेका छौँ भन्ने उदाहरण पनि हो । अहिले चेम्वर अफ कमर्शमा चार सय व्यवसायीहरु आवद्ध भैसकेका छन । अहिले पनि व्यवसायीहरु आवद्ध हुने क्रम बढि रहेको छ । हामीले अहिले दैनिक तीन घण्टा सस्थाको काम गर्ने गरिरहेका छौँ । त्यसले गर्दा व्यवसायीहरु बढि रहेका छन ।
प्रश्न ः तपाई भर्खरै चेम्वर अफ कमर्शको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । संस्थालाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
उत्तर ः हाम्रो संस्था नयाँ भएकाले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि चेम्वरलाई दाङ उद्योग बाणिज्य संघले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सकेको छैन । सुरुमा दाङ उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कमर्श समान उद्देश्यका व्यवसायीक सस्था हुन भनेर व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । बाहिर जिल्लाामा व्यवसायीहरुलाई परेका समस्याहरुमा चेम्वर अफ कमर्श र उद्योग बाणिज्य संघले समान रुपमा समास्या समाधान गर्ने गरेका छन । तर, जिल्लामा एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता उद्योग बाणिज्य संघसँग सम्वन्ध सुुधार गर्नुपर्ने छ । त्यसमा मेरो ध्यान जानेछ । त्यस्तै संस्थालाई बलियो र संस्थागत बनाउन व्यवसायीहरुलाई पर्ने कर, भ्याटलगायतका समस्या समाधानमा हुनेछ । त्यसका लागि हामीले छलफल, भेला र प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा गरिरहने छौ ।
त्योसँगै हाम्रो अर्काे काम भनेको सामाजिक उत्तरदायित्वका पनि छन । जस अन्तरगर्त हामीले जिल्लाका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र पर्यटकिय विकासका लागि समेत पहल गर्नेछौँ । म र मेरो कार्यसमिति त्यसतर्फ केन्द्रीत रहेर काम गर्नेछ ।
प्रश्न ः चेम्वर अफ कमर्श दाङ शाखा र चेम्वर अफ कमर्श घोराही शाखा एउटै भएको हो ?
उत्तर ः चेम्वर अफ कमर्श दाङ शाखा र चेम्वर अफ कमर्श नितीगत रुपमा मिलि सकेका छन । तर सुरुमा केन्द्रीय कार्यसमितिको सानो तुर्टिका कारण एकै स्थानमा दुई वटा कमर्श स्थापना हुन गएका थिए । चेम्वर अफ कमर्शको केन्द्रीय विधानले जिल्ला शाखा रहेको स्थानमा नगर शाखा नराख्ने व्यवस्था छ । तर केन्द्रीय समितिको सानो मिस्टेकका कारण घोराहीमा जिल्ला शाखासँगै नगर समिति पनि हुन पुग्यो । त्यो नहुनु पथ्र्याे भयो । अहिले त्यो समस्या समाधानका लागि पहल भैरहेको छ । त्यसका लागि धेरै पटक हामी छलफल गरेका छौ । एकै ठाउँमा आउने सहमति भएको छ । तर नितीगत समस्याका अझै हुन सकेको छैन । केही समयपछि हामी एकै ठाउँमा आउने छौँ ।
प्रश्न ः व्यवसायीक हकहितसँगै उपभोक्ताको अधिकारलाई कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ ?
उत्तर ः चेम्वर अफ कमर्श उद्योग व्यवसायीहरुको पक्षमा मात्र बोल्ने सस्था होइन । हामीले व्यवसायीको हकहितसँगै उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्ने गरेका छौँ । त्यसैले व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने मात्र होइन उपभोक्ताको अधिकारप्रति सचेत बनाउनकालागि तालिमको व्यवस्था गरेका छैँ । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तर रुपमा लैजाने छौँ । उपभोक्ताहरुले गुणस्तरिय सामग्री उपभोग गर्न पाउन, गुणस्तरहिन म्याद सकिएका बस्तु किन्न नपरोस र अन्य सामग्रीहरु किन्दा समेत ठगिनवाट जोगाउनका लागि बजार अनुगमनमा जोड दिएका छौँ । त्यस्ता सामानहरु बेच्नु हुदैन भनेर व्यवसायीलाई समेत सचेत बनाउने काम गरेका छौ ।
प्रश्न ः जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका केही योजना बनाउनुभएको छ ?
उत्तर ः आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भनेको व्यापार व्यवसायको प्रवद्धन नै हो । यसका लागि राज्यले व्यवसाय प्रवद्धन गर्ने निती नियम ल्याउन आवश्यक छ । जिल्लामा स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन, पर्यटकिय क्षेत्रको विकास तथा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै अहिले पनि घोराहीलगायतका क्षेत्रमा विकास पूर्वाधारहरु समयै निर्माण हुन सकेका छैनन् । विकासका पूर्वाधारहरुलाई निर्धारित समयै सक्नका लागि राज्यले निती नियममा कडाई गर्नुपर्छ । र स्थानीय उत्पादनको बजारी करणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसकालागि व्यवसायीहरुलाई प्रवद्धनमा हामीले समेत सहयोग गर्ने छौँ ।
प्रश्न ः उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कमर्श दुवै व्यवसायी सस्था भएपनि व्यवसायीलाई समस्या पर्दा किन एक ठाउँमा आउन सक्नुभएको छैन ?
उत्तरः हो तपाईले भने जस्तै दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कमर्श दुवै व्यवसायीक सस्था हुन । दुवैले व्यवसायीहरुको हकहित र उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने सस्था हुन । दुवै सस्थाका विचमा बाहिरी जिल्लाहरुमा समस्या छैन । तर हाम्रो जिल्लामा केही समस्या देखिएको छ । हामी विच देखिएको समस्या समाधान गर्न मैले मेरो कार्यकालमा पहल गर्ने छु । किन कि हामी दुवै व्यवसायीक सस्था हौ । दुवैले व्यवसायीका पक्षमा बोल्ने र वकालत गर्ने हो । व्यवसायीलाई जुन ठिक लाग्छ त्यहाँ जान पाउने व्यवसायीको अधिकार हो । त्यसैले दुवै सस्थाहरु व्यवसायीका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्छ । सँगै मिलेर अघि बढेऔँ भने व्यवसायीहरुलाई राम्रो हुनेछ ।
प्रश्न ः अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
उत्तर ः चेम्वर अफ कमर्श व्यवसायीक संस्था हो । जिल्लामा व्यवसायीहरुलाई पर्ने समस्यामा व्यवसायीका पक्षमा बोल्ने र सरकारले ल्याउने गलत निती नियमको विरुद्धमा हामीले सधै आवाज उठाउने गरेका छौ । अन्त्यमा मेरो र चेम्वर अफ कमर्श दाङको धारना राख्ने अवसर दिएकोमा सञ्चारमाध्यम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यावाद छ ।
महोत्सवले जिल्ला भित्र पनि कुखुराको खपत बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ २०७६ श्रावण २२, बुधबार २१:५३
सबै पक्ष मिलेर कर र महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं,दाङको गरीमा र प्रतिष्ठा बनेको राप्ती स्वास्थ्य प्रष्ठिान प्रभावकारीरुपमा चलाऔँ २०७६ श्रावण २२, बुधबार २१:५३
पश्चिम दाङको विकासका लागि उमेदवार बनेको हुँ-वली (भिडियोसहित) २०७६ श्रावण २२, बुधबार २१:५३